"ए मेरो हजुर-२"का सालिनमान बानिया जस्तै देखिने को हुन् यी युवा ? (हेर्नुहोस् भिडियो) - Pokhara News
“ए मेरो हजुर-२”का सालिनमान बानिया जस्तै देखिने को हुन् यी युवा ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
- पोखरा न्युज भाद्र ५, २०७४
[mom_video type=”youtube” id=”gerRKt3FtlY”]
एकै अनुहारका संसारमा ७ जना सम्म हुन्छ भन्ने भनाई चलिआएको छ। नेपालि फिल्म लाईनका कलाकारहरुमा पनि केहि यस्ता छन्, जसको अनुहार मिल्न जान्छ। महा-नायकको उपनाम भिरेका राजेश हमाल जस्तै देखिने अर्का कलाकार सितल केसी हुन।
यस्तै यतिबेला नया कलाकारसंग नया कलाकारको पनि केहि रुपमा अनुहार र जिउडाल मिलेको पाईएको छ। कुनै बेला नेपालि सिने नगरीमा नायिकाको रुपमा एकछत्र राज गरेकी झरना थापाको डेब्यु निर्मात्री रहेको फिल्म “ए मेरो हजुर-२” का डेब्यु नायक सालिनमान बानिया संग अर्का संघर्षरत नव कलाकार सुमन साह संकरको अनुहार केहि रुपमा मिल्न गएको हो ।